RIKOODH: Lionel Messi Iyo Luis Suarez Oo Xalay Barbarreeyey Rikoodhkii Gool-dhalinta Ronaldo Nazario - Gool24.Net
RIKOODH: Lionel Messi Iyo Luis Suarez Oo Xalay Barbarreeyey Rikoodhkii Gool-dhalinta Ronaldo Nazario
Labada saaxiib ee Luis Suarez iyo Lionel Messi ayaa xalay soo wada qabtay rikoodhkii gool-dhalinta ee halyeygii reer Brazil ee Ronaldo Nazario, kaddib markii ay labadooduba wacdaro ka dhigeen kulamadii isreeb-reebka Koobka Adduunka ee ay u ciyaareen Uruguay iyo Argentina.
Ronaldo Nazario ayaa xulka qarankiisa Brazil u dhaliyey 39 gool oo isreeb-reebka Koobka Adduunka ah, waxaanay xalay soo qabtay Suarez markii uu waddankiisu 2-1 ku garaacay Chile oo ay ciyaar muran ka dhashay ku dagaallameen.
Suarez ayaa rikoodhe u dhaliyey qarankiisa qaybtii hore, si uu rikoodhka Ronaldo ee halka gool uga dhinnaa usoo qabto.
Goolka Suarez dhaliyey oo uu ka daba yimid Alexis Sanchez oo Chile u dhaliyey goolka barbarraha ayaa waxa xilli dambe libinta ku hoggaamiyey Uruguay laacibka Maximiliano Gomez oo shabaqa soo taabtay waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray.
Dhinaca kale, Lionel Messi ayaa isaguna rikoodhe u dhaliyey Argentina kulan ay 1-0 kaga adkaadeen Ecuador, waxaanu goolkaasi u noqday midkii 39aad ee uu ka dhaliyo kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka, waxaanu sidaas kula sinmay Ronaldo Nazario.
Messi ayaa waxa goolkiisani uu u ahaa kii 71aad ee uu u dhaliyey waddankiisa, waxaanu tirada guud kaga horreeyaa Ronaldo iyo Suarez, laakiin waxay u ahayd habeen qurxoon oo uu ku raaxaysanayay rikoodhka uu soo qabtay, inkasta oo dalkiisu uu garoonka gudihiisa ku dhibaatooday oo ay ciyaartu ku adkayd.
Suarez iyo Messi ayaa waxay fursad u haystaan inay sii kordhisaan goolashooda oo ay dhaafaan Ronaldo Nazario maadaama ay xalay uun u bilowdeen kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka qaaradda Latin America.